Inkinga yokukhula ezingabantu
Ngokwezibalo, obumbi ubudala maphakathi ezingabantu kwenzeka isikhawu kusuka eminyakeni 35 kuya 45. Kwakuphakathi nalesi sikhathi kuvame ukuvela nini isehlukaniso (ikakhulukazi kusukela eminyakeni 38 kuya 42), ukuphahlazeka professional, neurosis, ukuba umlutha wotshwala futhi aze azibulale.
Yiqiniso, ukuze ushayele le nkathi ulimi ukukhanya kwenjabulo umane ingavuli. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, yiso ngalesi sikhathi kukhona kuhlolwe yamanani, ukuzazi, yokufuna Ukuhlakanipha kwezwe.
Ngakho-ke kuyinto Inkinga maphakathi no-ukuphila ezingabantu, futhi kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuyinqoba?
Izimpawu inkinga yokukhula
Izimpawu sici iningi crisis yilezi:
Ukukhathazeka ngekusasa lawo (isib, ukwesaba ukuphelelwa imisebenzi yabo futhi kwesokunxele ngaphandle bazitholele okokuziphilisa).
monotony usezwa - kubonakala sengathi ukuphila akwenzeki lutho ezintsha nezithakazelisayo.
Ukucindezeleka, ukunganeliseki, ukunganakwa, iziyaluyalu uvalo.
Umuzwa impilo ebuthaka (kule nkathi izimpawu zokuqala ukuguga, ukugebenga esebenzisa isihluku yizifo ezingamahlalakhona, njll).
Revaluation ngomshado ohlangothini ezimbi (ngalesi sikhathi iba umlingani womuntu, ecasulayo, ukudlula noma iyiphi enye).
ukuhlolwa Negative we umsebenzi wamanje (lapha libhekene umuzwa ukungeneliseki kuyo yonke imisebenzi yakhe, isifiso ukuqala futhi ukushintsha ngokuphelele konke).
Ikhanga esotericism noma inkolo (ngalesi sikhathi kuba umbuzo efanele yochungechunge: "Iyini injongo yokuphila" futhi "Sihlaleleni singenzi ozalwa?").
Izizathu inkinga yokukhula
Lapho ufika abaneminyaka engu-35 amadoda aqale ukuhlaziya esidlule futhi esekelwe imiphumela eyatholakala, ukucabanga ngekusasa. Ngomqondo onabile, angeke sikhone kusho ngalokucondzile kutsi kubi - kodwa lokho abantu abaningi, ekugcineni, ukuza yizehluleki nobuze. Ezinye zazo ayaqala ukuba ukhathazeke yobudala bakhe - isigamu ukuphila isikhathi eside, futhi izinto eziningi ukuthi ngifuna ukufeza - futhi engakaze ufinyelelwe.
Uma indoda isencane kakhulu Ngiqale umndeni nezingane - sebevele ngempela esekhulile, kwenze kube nzima ukuzwa ungubani crisis. Ngenxa yalokhu, lapho ngokuvamile ezinye engaqondakali kwabanye, ezama ukufakazisa ukuthi ebusheni bakhe.
inkinga yokukhula for amadoda - yini okumele ngiyenze?
Uma izimpawu zokuqala babonakala - Okokuqala udinga ukuqonda ngokucacile ukuthi kwenzekani ungabhali off bonke ukukhathala evamile, ukucindezeleka, ukungakhululeki, njll
Ukuze uphinde uhlolisise impilo yakho, ukukhetha imigomo ebaluleke kakhulu iminyaka eminingi. Qonda - futhi uma they nempela wanted futhi kwakudingeka?
Ukugxilisa ingqondo amabutho ayo emizameni ukugwema isimo esibucayi, futhi amathuba iSilekeleli Sokwazisa kule nkathi. Kuleli qophelo, kubalulekile ukuqonda - impilo esizayo kuxhomeke endleleni uzobe wazibonela sikhathi.
Sesha amaphupho amasha idolo futhi imigomo ukuthi abayosinda crisis ubudala maphakathi ezingabantu. Lihlole ulula: uma ke umcabango wokuthi kukhona ekilasini akhethiwe nomfutho kanye umqondo zenjabulo, ngakho kungcono okufanayo.
Ukuqalisa zonke izinhlelo, okuyinto kwakufanele kwenziwe engxenyeni yokuqala yokuphila. Funda i-snowboarding? Yenza uhambo lokuzungeza umhlaba? Kuyadingeka ukwenza wonke oyifunayo ... futhi zibe sezingena impilo entsha nge amaphupho amasha.
Ingabe revaluation ubudala babo. Kungaba kubhekwe yi elingenakuqhathaniswa obumbi: ingqondo, ibe ukuhlakanipha; ikhono uxhumane, ophasiswe sekwenza; ungubani, siguqulelwa a ithemba.
Abaningi bakholelwa ukuthi inkinga ubudala maphakathi ezingabantu - eqinisweni akukho kuka umbhedo. Nokho, lesi sikhathi nje libhekisela engokwemvelo kakhulu sokuphila ngazo, kungakhathaliseki ukuthi izifiso, zenzeka kuwo wonke umuntu. Futhi kubaluleke kakhulu ukunquma indlela yokunqoba ke, isikhathi nesikhathi, onjani Imiphumela bazithole kuwo. Phela, izinqumo ezithathwe kuzoncika zonke ekuphileni okwalandela.
Indlela uphumule futhi ukuqeda ukucindezeleka? izindlela izincomo
Kuyini lithathelwe. izinhlobo
Ukwelashwa engqondweni yethu
"Cefoperazone + Sulbactam": yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa
Jalapeno - lokho oyikho nalokho ibadla?
Elingenalutho-iphuzu ichashazi izolo nanamuhla
Nissan Sentra: ukubuyekezwa kanye Ukubuyekeza sedan
Amakhosi Xulima - ndima, indaba, Gameplay, izinto kanye nezinye izici game.
Izifo lokuvikela nezibani germicidal